Ciidanka xooga ee Gobolka Hiiraan oo Al-shabaab ka qabsaday Hub iyo Gaadiid. – Hornafrik Media Network
Ciidanka xooga ee Gobolka Hiiraan oo Al-shabaab ka qabsaday Hub iyo Gaadiid.
By HornAfrik	 On Mar 27, 2018
Baladweyn-Hornafrik-Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan,iyada oo saraakiisha howlgalkaas hogaamineysa ay sheegeen in ay guulo waaweyn ka gaareen.
Howlgalka ayaa Ciidamada dowladda waxaa ku wehlinayay kuwa Itoobiya oo qeybta ka ah AMISOM,waxana Saraakiisha ciidamada xoogga dalka ay sheegeen in ay Al-Shabaab kala wareegeen hub iyo Gaadiid intaba.
Taliyaha Guutada 10aad ee Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee Gobolka Hiiraan Faarax Cali Waasuge oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaal dhexmaray iyaga iyo Al-Shabaab ay uga furteen hub iyo Gaadiid,sidoo kalena ay kala wareegeen deegaano ay horay ugu sugnaayeen.
Taliyaha oo hadalkiisa wata ayaa waxaa uu sheegay in ay dhawaan guud ahaan Hiiraan ka saari doonaan Al-shabaab islamarkaana ay diyaariyeen ciidanki ku nagaan lahaa deegaanada la qabsado.
Xildhibaanada Maamulki Ahlusuna ku matalaya Baarlamaanka Galmudug oo la soo saaray.
Kunteenar Qamri ah oo Muqdisho lagu qabtay.